NBC Sports 1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
Application မ်ား အားကစားမ်ား NBC Sports
NBC Sports ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အား NBC, NBCSN, အား NBC အားကစားရွှေ, ဂေါက်သီး Channel ကို, အိုလံပစ် Channel ကို, Telemundo ပြည်နှင်ဒဏ်နှင့်အား NBC အားကစား app ကိုပိုမိုအပေါ်တိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Watch!
ဆက်ကပ်အပ်နှံထား BRAND အတွေ့အကြုံ:
•အား NBC အားကစား
•အား NBC အားကစားရွှေ
•ဂေါက်သီး Channel ကို
•အိုလံပစ် Channel ကို
• Telemundo ပြန်ပို့ခံရ
: အပါအဝင် Streams တိုက်ရိုက်အဖွစျအပကျြ
• NFL တနင်္ဂနွေညဘောလုံးပြိုင်ပွဲ
•အကြောင်း NHL ပုံမှန်ရာသီနဲ့ Stanley ဖလား PLAYOFF
• NASCAR Monster စွမ်းအင်နှင့် Xfinity စီးရီးလူမျိုး
• Triple Crown (ကီဒါဘီ, Preakness ရှယ်ယာများကိုနှင့် Belmont ရှယ်ယာများကို)
အား NBC SPORTS ရွှေ - PASS, HIGHLIGHTS:
PGA Tour တိုက်ရိုက်•: PGA Tour အုပ်စုများပေါင်းစည်းအမှတ်ပေး featured
• PREMIER LEAGUE PASS,: ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များနှင့်ပြပွဲ
• Cycle PASS,: Tour de ပြင်သစ်, Vuelta တစ် Espana, ပဲရစ်-Roubaix
• SUPERCROSS PASS,: Monster စွမ်းအင် Supercross
• PRO Motocross PASS,: လူးကပ်စရေနံ Pro ကို Motocross ချန်ပီယံရှစ်
•ရပ်ဘီ PASS,: ခြောက်နိုင်ငံများအသင်းချန်ပီယံရှစ်, ပရီးမီးယားရပ်ဘီ
• TRACK နှင့်လယ်ယာ PASS,: USATF & IAAF ချန်ပီယံ, စိန်လိဂ်
•ပုံစကိတ်စီးခြင်း PASS,: ISU Grand Prix စီးရီးအမေရိကန်ချန်ပီယံရှစ်
•အမြန်စကိတ်စီးခြင်း PASS,: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲ
• BLAZERS PASS,: Trail Blazers ဂိမ်း
• PHILLY PASS,: Pregame, Postgame နှင့် Specials - လင်းယုန်, Sixers, Phillies & Flyer
• NFL: လင်းယုန်, မျိုးချစ်, Redskins, ကျီး, ဝက်ဝံ, 49ers နှင့် Raiders
• NBA: 76ers, နွားသိုး, Celtic, ရာဇဝငျ, Trail Blazers, စစ်သည်များနှင့် Wizards
•အကြောင်း NHL: ဘလက်ဟော့, အရင်းအနှီး, Flyer နှင့်ငါးမန်း
• MLB: ပြေးခုံပစ်, ပေါက်တွေ, Giants, Mets, Phillies နှင့်အဖြူရောင် Sox
• MLS: ငလျင်နှင့်တော်လှန်ရေးတွင်
•တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ: LIVE marquee အား NBC အားကစားဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်!
• On Demand ကိုဗီဒီယို: အတိတ်ဖြစ်ရပ်များထဲကနေပျေါလှငျ access ကိုဗီဒီယို, preview ကိုလာမည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ထုတ်စစ်ဆေး
•အပြည့်အဝ Event replays: အပြည့်အဝဖြစ်ရပ် replays နှင့်အတူအားလုံးအကြီးအအချိန်လေး relive
• Push ကိုအသိပေးချက်များ: လာမည့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်သတိပေးချက်သတိပေးချက်များလက်ခံရရှိ
အား NBC အားကစားကစားသမားထိန်းချုပ်မှုအတွက် "CC ကို" icon လေးနှင့်အတူပြပွဲအပေါ်စာတန်းထိုးထောက်ခံမှုပူဇော်ဖို့ဂုဏ်ယူသည်။ ရုံဖွင့်ဖို့မထိ။
ယင်းအား NBC အားကစား app ကိုအပေါ်တိုက်ရိုက်လွှင့်အကြောင်းအရာအများစုသည်သာနေရာတိုင်းမှာတီဗီကနေတဆင့်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုထားတဲ့ cable ကို, ဂြိုဟ်တုများနှင့် Telco ဖောက်သည်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက် app ကို setting များကိုအပိုင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
အား NBC အားကစားရွှေအကြောင်းအရာတီဗီ provider ကစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းမရှိဘဲရရှိနိုင်ပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခကြေးပေးသွင်းအခကြေးငွေသက်ဆိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Blazers Pass ကို NBA စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်သဘောတူညီချက်များအညီ Blazers နယ်မြေတွေကိုတည်ရှိသောပရိတ်သတ်များမှသာရရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါ Philly Pass ကိုပုအား NBC အားကစား Philadelphia တွင်ဖြန့်ဖြူးရပျကှကျမှာရှိတဲ့မရရှိနိုင်။
အား NBC အားကစားဗီဒီယို USA နဲ့အချို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများအတွက်သာသုံးစွဲနိုင်သည်။ အဆိုပါ application ကိုတစ်ဦး 3G, 4G, LTE ကိုသို့မဟုတ် Wi-Fi network ကိုဒေတာဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ 3G သို့မဟုတ် 4G ဆက်သွယ်မှုကျော်ကဗီဒီယိုအကဲခတ်သင်၏ကြိုးမဲ့ဒေတာအစီအစဉ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဒေတာကိုစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုသင့်ရဲ့ဒေတာဆက်သွယ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပါလိမ့်မယ်။
အသုံးပြုရန်အား NBC SPORTS TERMS: https://www.nbcsports.com/terms-use
အား NBC SPORTS မူပိုင်ခွင့်မူဝါဒ: https://www.nbcuniversal.com/privacy
NBC Sports အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
NBC Sports အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
NBC Sports အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
NBC Sports အား အခ်က္ျပပါ
appstv စတိုး 44.17k 84.44M
NBC Sports ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း NBC Sports အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ NBCUniversal Media, LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.nbcuniversal.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: 9B:9B:E1:79:7D:CF:87:26:E3:09:49:17:5E:39:58:C1:D6:3F:F8:AF
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Diogenes Marchena
အဖွဲ့အစည်း (O): NBCUNiversal Media LLC
NBC Sports APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ